iyona ukuthuthukiswa Ukuthreyila Omunye elula embodiments ezemidlalo Tuning. Lokhu kuvumela ngentengo elincane kakhulu ukushintsha ukuziphatha imoto. Ukuze embodiments engcono ibhanoyi izingxenye kokuba nekusebenta enkulu, zihlanganisa ukumiswa isikulufa.
Le nto isakhiwo ngokuhlanganisa isiphethu kanye mfutho ukushaqeka. Futhi ngokuthi coilovers kanye nokumisa adjustable.
Kunezindlela ezimbili ukusetha izinto idatha.
intambo futhi isiphethu Kuvunguza ungayithola enye. Ukumiswa kweminikelo kungenzeki ngaleso sikhathi ayizwakali ngenxa kokuqala ukumiswa lokungafani izingxenye ezintsha. Lokho mhlawumbe ngisho eziya ziba zimbi ukuziphatha imoto.
ke Kuyancomeka ukushintsha yokubeka. Lokhu kuhilela ukufakwa entwasahlobo damper ekhona ukwakhiwa kunye. imingcele yabo kubalwa ngumkhiqizi, ngakho lezi isikulufa ukumiswa kube nemiphumela ekahle kakhulu.
Inzuzo enkulu imininingwane enjalo, ngenxa ezingamalungu esikhundleni ukumiswa ejwayelekile, ngokuvumelana amathuba olubanzi ukulungiswa. Lokhu kukuvumela ukuthi bakhethe izilungiselelo elikhulu ngamunye. Futhi ukushintsha imingcele Kulula kakhulu umsebenzisi Ngokwesilinganiso, futhi kuba amathuluzi anele ususondele.
Ngaphandle ikhoyili ukumiswa kunalokho lula ukufaka, lo msebenzi Nokho kungase kwenziwe ngokuzimela.
Ukumiswa yalolu hlobo kunzima ukusebenzisa kuqhathaniswa ezivamile. Lokhu kungenxa ngokuyinhloko isidingo ukulungisa kahle ukuze zithole imiphumela emihle. Kuhlotshaniswe izikhathi lo msebenzi ezimbi kakhulu, kusukela okungafanele ukulungiswa imingcele kungaholela ukuwohloka enkulu yokuziphatha kwenqola. Nokho, kukhona kuphela yezemidlalo ukusetshenziswa nsuku zonke ukuze ulungiselele ukumiswa kanye, kanye nesidingo ukulungiswa njalo ukuze zithole imiphumela emihle ngaphansi kwezimo ezihlukahlukene. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukusebenzisa onguchwepheshe ukuze uhlele noma ufunde ngokwakho.
Futhi, yazi sengozini uxhumano kochungechunge, ikakhulukazi ithonya reactants. Ukuze ugweme khahlela kuyinto nuts ngokwanele ukuba zisebenze intambo ihlanganisa Racks noma zokugcoba.
Njengoba ukuqonda kusukela ngenhla, imoto ukumiswa isikulufa isetshenziselwa ukulungiswa enhle yokuthuthukisa controllability. Ngokwemvelo, kubalulekile for Tuning okuhloswe ngayo ukwenza ngcono ukusebenza ngesivinini. Ngakho, ethandwa kakhulu ukumiswa Kuvunguza Vaz, njengoba isitokwe zalezi zimoto abe handling ezimbi futhi silungisa wabo engabizi, ngakho esakazwa.
Ngaphezu kwalokho, lezi zingxenye asetshenziselwa izimoto ezemidlalo ukuze sithuthukise ukusebenza kwabo ukuze kutholakale imiphumela engcono nangokwengeziwe. Ngakho-ke, ezivamile Helical ukumiswa BMW, ikakhulukazi onobuhle amadala, kanye Japanese ezemidlalo imoto.
Inani kubhekwa izingxenye siyahlukahluka ezahlukene kuye ngokuthi kushuba umakhi. Ngakho, izindleko onobuhle elula iqala ruble angu-20 000. Lezi zihlanganisa, isibonelo, a Kuvunguza elengayo Ta Technix. Ngesikhathi esifanayo intengo version eziphambili kakhulu HKS - ruble abangaphezu kuka-270 000.
Setha isikulufa ukumiswa Kulula ngezandla zakho. Akudingi yimuphi imishini ephambili. Enough uhlu encane amathuluzi alula, ehlanganisa iqoqo amakhanda futhi ububanzi elihambisana izikhiye, futhi polyhedra Stars, uthambise, Jacks ezimbili (mhlawumbe wokubacindezela).
Oku-ufunde imiyalelo umshini Kunconywa ukufunda indawo imishudo. Ngaphezu kwalokho, lapho kungenzeka khona ukuba ubuchwepheshe etholakalayo nokushintsha shock absorbers.
Kufanele uqale nge ukumiswa labaqaphi elingemuva.
Imoto kumele efakwe phezu flat.
Okulandelayo isondo isuswe, pre-ukhulisa umshini.
Khona-ke ubekwa kanye isondo eliyisipele ngaphansi imoto bese uphonsa.
Yasekelwa ugongolo Jack imishudo kuthiwa zathukululeka.
Ngemva ukuqaqa lesi girder kungenzeka kokubili wezinciphisi ivinjelwe.
Shock pads kumelwe ithathelwe uma sezigugile.
Ngaphambi kokufaka entsha ukushaqeka wezinciphisi kudingeka ukumpompa.
Futhi kudingeka ulungise ukuqina babo njengokungathi bazithoba mshini ukulungiswa emva kokufakwa ngeke babe nokufinyelela.
Eceleni entsha ukushaqeka wezinciphisi phezulu Ukukhweza enamathiselwe.
Basuke aboshelwe emzimbeni nge bolts.
I iziphethu esikhundleni.
Khona-ke imoto jacking ngaphambi kokungena imbobo ukumiswa umshudo.
Ngemva kwalokho amabhawudo kuthiwa some futhi isuswe Jacks.
Inqubo yokufaka kuyadingeka ukuze gcoba imicu, bese qinisa Ilokhi nut.
Ubuchwepheshe esikhundleni phambi ukushaqeka wezinciphisi uyefana. Vele uqaphele ukuthi imishudo zitholakala ngaphansi hood.
Ngokulungisa kwemigomo ukumiswa uqhubeke ngokushesha emva kokufakwa. Lokhu kwenziwa ngezikulufo.
Inombolo izici mutable elahlukile embodiments ezahlukene. Yingakho kwezinye iziphanyeko inikeza ukulungiswa ngesikhathi esisodwa phansi imvume futhi Layisha iziphethu, okuyinto ikuvumela ukuba ushintshe ukuphakama yemoto ngenhla komgwaqo kanye ukuqina ukumiswa. Nokho, awukwazi ukumisa kulezi zici ngokwehlukile. Leyo mikhumbi eyinkimbinkimbi kunazo babe amashumi amaningana eqinisa hlinzeka futhi ukulungisa nemingcele ezifana Rebound, kokucindezelwa, camber futhi ocolisekileyo, isici ngasinye kuyahlukahluka ngamunye.
Abaningi babe ukulungiswa isikulufa ukumiswa Layisha entwasahlobo camber, ride ukuphakama, ocolisekileyo.
Ukusetha ipharamitha lokuqala, uma entwasahlobo efakwe ngokwehlukana, kukhona nuts ezimbili (futhi locknut podpruzhinnik) ku ingilazi noma yokubeka.
Ride ukuphakama ukulungiswa Kwenziwa imishudo amabili ezansi the yokubeka. Zithukulule Ilokhi nut, ukuyishintsha ngaphandle kokuphazamisa lo ukuqina we-shock absorbers.
Ukushintsha camber futhi ocolisekileyo, kokuqina inkomishi entwasahlobo esindayo.
Subaru wehlathi - izibuyekezo abanikazi
Ukubuyekeza: Cordiant Road Runner. Izimpawu amathayi kusukela abanikazi imoto
Ihhotela Aladdin Hurghada ukunikeza Leisure engcono
Inkulumo yokwelapha imihlangano nge ingane 3-4 ubudala. Ukulungiswa yokukhuluma ukukhubazeka
Kuyini isifo periodontal? nezimbangela zayo
Ijeli Remover ukuvenisha: Sebenzisa umehluko wemisindo nemiqondo yamagama
Indlela ukukhetha futha sprayers Hand? Izibuyekezo
Umlingisi Dzheffri Tembor: Biography, Filmography, ukuphila siqu futhi ezithakazelisayo amaqiniso
Orange Ukudla - Lose Weight esihlwabusayo
Umdlalo "I-Warfyus": izidingo zesistimu namahluzo